Kuzoshintsha okuningi kwezemfundo | Isolezwe
Kuzoshintsha okuningi kwezemfundo
Isolezwe / 3 December 2012, 12:56pm /
UMNUZ Senzo Mchunu onguNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal othi imfundo ayisophinde yafana nakuqala kulesi sifundazwe
UHLELO nezinga lezemfundo KwaZulu-Natal alusophinde lufane neminye iminyaka edlule ezikoleni.
Usho kanje uNgqongqoshe wezeMfundo kulesi sifundazwe uMnuz Senzo Mchunu eThekwini ngenkathi ethula ngokusemthethweni uhlelo lokuguqulwa kwendlela yokufunda ezikoleni kulesi sifundazwe.
Phakathi kwezinguquko athe zizokwenzeka, ubale ukuthuthukisa ulwazi kothisha ikakhulukazi abafundisa iMathematics neScience kuwo wonke amabanga emfundo. Uthe uMnyango uzozinikela nasekuqeqesheni othishanhloko bezikole okubonakalayo ukuthi ziye zadonsa kanzima emva kokuba kade sekuqedwe izivivinyo zokuqeqesha abafundi.
“Sizokwenza isiqiniseko sokuthi bayakuqonda ukuthi yini elindeleke kubona njengabaphathi ezikoleni nasekulandeleni uhlelo lwezemfundo,” kusho uMchunu.
Uthe kuyimanje basezinhlelweni zokwandisa izikole ezifundisa ngezolimo nalezo ezifundisa ngezasolwandle.
“Okunye esizokwenza, ukusungula isikhungo okuzofundiswa kusona abafundi abakhaliphile emkhakheni weMaths, iScience nezobuchwepheshe. Lesi sikhungo sizokwengamela bonke abafundi abakhombisa ubuhlakani kulezi zifundo kulesi sifundazwe. Sizoqala ukwamukela abafundi kulesi sikhungo ngo-2014,” usho njalo.
Ukuqedwa kwezikole ezakhiwe ngodaka, ukuvalwa kwezinye zezikole ezingenzi kahle kuhlanganiswe ndawonye abafundi kulezo ezenza kahle, nokuhlelela abafundi ngezinto zokuthatha eziya ezikoleni, ngezinye zezinto athe ziyingxenye yokuguqula isimo sokufunda kulesi sifundazwe.
“Asilindele umzali asitshele ukuthi amabhasi okuhamba abafundi afika ekuseni yena esalele. Kumele umzali azibuze ukuthi ngokusho kwakhe kanjalo, uyobe echaza ukuthi ingane yakhe ilahlekelwe yikusasa lezemfundo elihle ngoba nakhu angeke akwazi ukuvuka aphelezele ingane yakhe iyogibela esitobhini?” Ubuze kanje.
Mayelana nokuhanjiswa kwezincwadi zokufunda ngesikhathi esifanele ezikoleni, uthe: “Sesivele siqalile nokukwenza lokho. Kuyimanje sesihambise izincwadi ezingu-99.2% ezikoleni. Sizoqedela kahle ngoJanuwari ngaphambi nje kokuba kuvulwe izikole.”.
Nakuba engafunanga ukuzibophezela ekutheni lolu hlelo luzothatha isikhathi esingakanani ukuthi bafinyelele esiphethweni ngalo, kodwa isifiso wukuthi balwenza luphelele ngokukhulu ukushesha lokhu.
UMnuz Reggie Chiliza okhulumela inhlangano yezigungu ezilawula izikole kulesi sifundazwe uthe balushayela ihlombe lolu hlelo oluqhamuke noNgqongqoshe.
“Lolu hlelo lufike ngesikhathi esifanele. Luyasijabulisa ngoba lukhombisa ukuzibophezela nokukhathalela kukaNgqongqoshe imfundo yezingane,” kuphawula yena.
Uthe nabo bazokwenza isiqiniseko sokuthi lolu hlelo luba yimpumelelo. Inyunyana yothisha iSadtu nayo isincomile lesi senzo njengesiza nesixazululo emfundweni ebinensila yobandlululo.
“Sinethemba lokuthi lomqulu wokuguqulwa kohlelo lokufunda uzothela izithelo ezizokuba yimpumelelo,” uchaze kanje.
Nezinye izinyunyana okukhona kuzo iNatu, Neptosa, Cosatu nosomabhi-zinisi, basishayele ihlombe isinyathelo sikaNgqongqoshe.